Adventure - Myanmar Asian TV
Snipers Shot ( 2014 )
IMDB မှာ 7.8 အထိ ရထားတဲ့ တရုတ်စစ်ကားလေး တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…. ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း လေးကတော့ တရုတ်ပြည် ရဲ့ ဇုန်ရွာ မှာ ရှန် ဆိုတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက် တောထဲ အမဲလိုက် ထွက်ရင်း အမှတ်မထင် တောထဲမှာ ဂျပန်တွေ လူတစ်ယောက်ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေတာကို မြင်ပြီး ဂျပန် စစ်ခေါင်းဆောင်ကို…
Big Fish & Begonia ( 2016 )
2016 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ တရုတ် animation film လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ Animation မို့လို့ ကာတွန်းကြီး မို့လို့ ခံစားလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ လူတွေအနေနဲ့ try ကြည့် သင့်ပါတယ် … Animation ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … ဇာတ်လမ်း နဲ့ ဒိုင်ယာလောခ့်တချို့ဟာ…
Woochi : The Demon Slayer ( 2009 )
Also known as Jeon Woochi The Taoist Wizard ဒီကားလေးဟာ တစ်ခေတ်မှာ တစ်ယောက်ထွန်းဆို သလိုပဲ ၁၅၀၉ခုနှစ်၊ ဂျိုဆန်ခေတ်မှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ မှော်ဆရာ ဂျောင်ဝူးချီရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေထဲက တစ်ခုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ ဂျောင်ဝူးချီရယ်၊ လူယောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ခွေးလေးရယ်အပြင် မကောင်းဆိုးဝါးတွေ၊ မှင်စာတွေက်ို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်…
အားလုံးလဲ ကြည့်ရှုပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသော်လည်း ထပ်မံကြည့်ရှုလိုသည့် ပရိသတ်များအတွက် 2016 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Operation Mekong ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို Blu-ray Quality ဖြင့် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် လာအိုတို့ ပူးပေါင်းကာ မူးယစ်ရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပုံကို ရိုက်ကူးထားသည့် Operation Mekong တရုတ်-ဟောင်ကောင် မှုခင်းအက်ရှင် ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ……
2010 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ How to Train Your Dragon ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ နံပါတ် ၂ ပါ … နံပါတ် ၁ မှာ နဂါးတွေ နဲ့ ဘာ့ခ် ရွာ တို့ ပြေလည်မှု ရရှိသွားကြပြီး နဂါးတွေရဲ့ လုပ်အားတွေနဲ့အတူ ဘာ့ခ်ရွာလေးမှာ နဂါးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေကြပါတယ် … အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကို…
Genghis Khan =========== အဓိကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ The Legend of Zu ကားထဲက William Chan နဲ့ The Mermaid ထဲက မင်းသမီး Lin Yun တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားတစ်ကားဘဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့……. ထယ်မုကျိန်နဲ့ပေါအယ်ထဲက ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေသဘောတူထားတဲ့ တကယ်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး တနေ့ထယ်မုကျိန်ရဲ့ဖခင်ဟာစစ်ပွဲမှာသေဆုံးခဲ့တယ် ထယ်မုကျိန်ဖခင်သေဆုံးမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူသော ဦးလေးကြောင့် လူမျိုးစုကွဲပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ…
ကောင်မလေးတွေရဲ့ အသဲစွဲ ဂျပန် အဝင်း ( Morisaki Win ) ရဲ့ Ready Player One လေးထွက်ရှိလို့လာပါပြီ … WEB-DL Ver အကြည်လေး ထွက်ရှိလာလို့ တင်ပေးလိုက်ရပါတယ် … Blu-ray ထွက်ရှိလာတဲ့အခါကျရင်လဲ Update ပေးပါဦးမယ် …. ဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးကတော့ – သူကခေတ်ရှေ့ပြေးသိပ္ပံဇာတ်လမ်းလေးပါ … 2045…
Memories of the Sword ( 2015 )
အခု တခေါက်တင်ဆက်ပေးမဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ rating အနေနဲ့ IMDb မှာ 6.3/10 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 73% အသီးသီးရရှိထားတဲ့ korea Drama , Action & Historical ဇာတ်လမ်းလေးပါ … အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ Hollywood အထိတောင် ထိုးဖောက်ထားနိုင်တဲ့ Korea နာမည်ကျော်…
MMATV ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် 2018ထွက် movieလေးဖြစ်တဲ့ A Wrinkle in Time ဆိုတဲ့ လုံးဝမိုက်တဲ့Movieလေးပါ Disney ဆိုတော်တော်များများကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ခုတစ်ခေါက်ကတော့လတ်တလောမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် Disney ကလွှင့်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်? သဘာဝလွန်ဇာတ်ကားတွေကိုမှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ? ဒီကားရဲ့ Film makerကတော့ Wreck-It Ralph, Frozen,Zootopiaတို့ကိုအသက်သွင်းထားတဲ့ Jennifer Lee ဖြစ်ပါတယ် ဒါရိုက်တာကတော့…
ကောင်မလေးတွေရဲ့ အသဲစွဲ ဂျပန် အဝင်း ( Morisaki Win ) ရဲ့ Ready Player One လေးထွက်ရှိလို့လာပါပြီ … HDRip Ver လေး ထွက်ရှိလာလို့ တင်ပေးလိုက်ရပါတယ် … Blu-ray ထွက်ရှိလာတဲ့အခါကျရင်လဲ Update ပေးပါဦးမယ် …. ဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးကတော့ – သူကခေတ်ရှေ့ပြေးသိပ္ပံဇာတ်လမ်းလေးပါ … 2045…
Resident Evil : Vendetta ( 2017 )
ဒီကားလေးကတော့ Vendetta ဆိုတဲ့အတိုင်း Actor လေးယောက်ရဲ့ အငြိုးတွေ လက်စားခြေမှုတွေနဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော်တော်လေးတော့ Actionဆန်ပြီးကြည့်လို့ကောင်းမှာသေချာတယ်ဗျ … Actor တွေကတော့ Leon S Kennedy , Chris Redfield , Rebecca Chambers နဲ့ Villanကတော့ Glan Arias တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် … ဇာတ်လမ်းပုံစလေးကတော့ – အစိုးရက…
Psychokinesis ( 2018 )
ဒီmovieကို poster စတွေ့တုန်းက အခုposterထဲကလိုပဲ လူကြီးတစ်ယောက်ကမိုးပေါ်မှာပျံနေတာပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ ratingလေးလည်းမဆိုးလို့ Trailerလေးကြည့်ကြည့်တော့လုံးဝမိုက်တာနဲ့ Directorကိုကြည့်လိုက်တော့ Train to Busanကိုရိုက်ထားတဲ့ Director Yeon Sang Ho ကရိုက်ကူးထားပေးတာပါ Effectပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းသေချာပညာပါပါရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးပေါ့ ဇာတ်လမ်းလေးကရောကောင်းပြီး 2018ထွက်လေးမို့လို့MMATV ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Leaderတွေကတော့ All about my wife,secret,war of the arrow,Miracle…
The Snow Queen2: Refreeze ( 2014 )
Snow Queen2: Refreeze လို့အမည်ရတဲ့ ကာတွန်းကားကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်!! ဇာတ်ကားအစပိုင်းမှာ Snow Queen 1 ( 2012 ) တုန်းက ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးကိုနဲနဲပြောပြထားတယ် … အဲဒီအပိုင်းမှာတော့ နှင်းဧကရီဟာ မှင်စာတိုင်းပြည်ကို ရေခဲအောင်လုပ်ခဲ့ပြီး အုမ်းဆိုတဲ့မှင်စာတစ်ကောင်ကိုဘဲ သူ့အခိုင်းအစေအဖြစ်မွေးထားခဲ့တယ် … နှင်းဧကရီရဲ့ခိုင်းစေမှုနဲ့ အုမ်းဟာ ဂျန်ဒါဆိုတဲ့လူသားမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနားကပ်ခဲ့ရတယ် … နောက်ပိုင်းမှာ အုမ်းက…
Red Billabong ( 2016 )
Red billabong 2016 movie ကတော့ အက်ရှင် စွန့်စားခန်း ဟာသ သဲထတ်ရင်ဖို ဇတ်လမ်းဖြစ်တာနဲ့အညီ ကြည့်ရူ့သူများကို ဆွဲခေါ်သွားပါတယ် ဇာတ်ကောင် ထရစ်စတန်နဲ့ နစ်ခ်တို့ ညီအကို၂ယောက် ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါ အဖိုးဖြစ်သူက မသေဆုံးခင်မှာ စာတစ်စောင်က်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပါတယ် အဖိုးဟာ လျို့ဝက်နက်နဲတဲ့သက်ရှိ တိရစ္ဆာန် တွေက်ုိ လေ့လာတဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် နောက်အခါမှတော့ billabong ရှိတဲ့ဒေသက သြဇီရှေးလူမျိုးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး…
နောက်ဆုံးတော့ Monster Hunt2လေး အကြည်ထွက်လာပါပြီ … WEB-Dl Ver. လေး ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ရပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့ – Monster Hunt ( 2015 ) ရဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်တဲ့ Wuba လေးကို မွန်းစတားတွေရဲ့ လက်ထဲ ထည့်ပြီးနောက်ပိုင်းကနေ ဆက်ထားပါတယ် … Wuba…